Sagaal bilood kaddib Taageerayaasha oo loo ogolaan doono inay soo xaadiraan garoomada kulammada maanta ee horyaalka Premier League – Gool FM
(London) 05 Dis 2020. Taageerayaasha ayaa loo ogolaan doonaa inay soo xaadiraan qaar ka mid ah garoommada kulammada ee maanta ee horyaalka Premier League.
Markii ugu horreysay muddo sagaal bilood ah, Taageerayaasha ayaa awood u yeelan doona inay soo xaadiraan kulammada maanta ee horyaalka Premier League.
Ilaa 2000 oo taageerayaal ah ayaa soo xaadiri doona kulanka West Ham United ay soo dhoweynayso Manchester United iyo kulanka kale ee Chelsea ay qaabileyso kooxda dhowaan soo dallacday ee Leeds United.
Taageerayaasha ayaa marka ugu horreysa soo xaadiri doona garoomada ku yaala magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska, kaddibna waxaa loo ogolaan doonaa inay xaadiraan garoomada ku yaala Magaalooyinka kale sida Liverpool iyo Manchester.
"Waxaan jeclaan lahaa inaan qibrad ka soo helo Premier League" - Tababare la la xiriirinayey Shaqada Kooxda Arsenal